Faa'iidooyinka Gudniinka | Ragga Stylish
Marar badan, raggu waxay u muuqdaan inay ka walwalaan wax kasta oo ku xeeran xubnaheenna galmada, sidoo kale waxaan xiiseyneynaa cudurada uu ku dhici karo, howlaha waxtarka leh ee aan ku qaban karno, laakiin sidoo kale dhinacyada ku saabsan, in kastoo aysan aqoon u lahayn. anaga, way na saameyn kartaa. si uun waqtigan xaadirka ah ama mustaqbalka dhow.
Iyada oo loo marayo qodobkaan waxaan isku dayi doonaa si qayaxan u ogaado waxa gudniinku yahay, faa iidooyinka iyo dhibaatooyinka ay keento iyo waxyaabo kale waxaan sidoo kale xallin doonaa qaar ka mid ah shakiga ugu badan.
1 Waa maxay gudniinku?
2 Taariikh taariikheed
3 Faa'iidooyinka iyo dib u dhaca
3.1 Faa'iidooyinka caafimaad
3.2 Gargaarka galmada
3.3 Dib udhacyada
4 Sababaha uu gudniinku muhiim u yahay
5 Gudniinku wax ma u dhimaa raaxada galmada ninka?
Gudniinka farsamada ayaa ah qalliin kaas oo buuryada laga gooyo oo laga soo gooyo guska, taasoo ka dhigeysa tan gebi ahaanba mid daaha laga qaaday. Si loo sameeyo hawlgalkan, suuxdinta maxalliga ah ayaa sida caadiga ah loo isticmaalaa, in kasta oo xaaladaha qaarkood iyo go'aanka caafimaad, bukaanku uu si buuxda u suuxin karo si looga fogaado khataraha ama dhibaatada bukaanka.
Afka xubinta taranka ee nin kastaa wuxuu leeyahay 80% maqaarka guska, waxayna kuxirantahay nooca gudniinka ee la sameeyo, qadar aad u badan oo unug ah ayaa lagu baabi'in karaa iyadoo ay jirto halista ay tani keeni karto.
M Muhiim: In kastoo dad badani qabaan in gudniinku waxtar leeyahay kordhi cabirka guska, taasi run maahan. Haddii waxa aad raadineyso ay tahay kordhi guskaaga hab nabdoon hada waa macquul halkan ka soo degsanaya buugga Master-ka guska
Sababaha loo sameeyo gudniinka wuxuu noqon karaa saddex nooc; diin, dhaqan ama caafimaad. Labada xaaladood ee hore, badanaa waxaa la sameeyaa dhalashada ama wax yar ka dib. Sababo caafimaad awgood ayaa lagu fulin karaa da 'kasta oo ay tahay iyo daaweyn ikhtiyaar daaweyn ah oo loo yaqaan' phimosis ', cudurada' balanoposthitis 'iyo cudurrada kaadi mareenka ee joogtada ah (UTI).
Gudniinka, in kastoo aan u maleyn karno inay tahay dhaqan la soo waday dhowr sano, wuxuu bilaabay in lagu dhaqmo kumanaan sano ka hor waana taas cadeymaha ugu horeeya ee tan waxaa laga helayaa sawir gacmeedka Masaarida ee jira inka badan 5.000 oo sano. Sida iska cad iyo tan iyo markaa farsamadii lagu fulin lahaa si aad ah ayey isu beddeshay, laakiin ma ahan dhaqan cusub ama mid la qabtay muddo gaaban.
Xaaladaha badankood tan iyo gudniinka waxaa loo sameeyaa iyadoo loo adeegsanayo xukun dhaqan ama diin, inkasta oo aad iyo aad u badan ay ku soo saaraan rijeeto caafimaad. Xaaladaha oo dhan waxaa lagu sameeyaa da'da hore inta badanna waxaa la sameeyaa markii ninku maalmo yar uun jiro.
Hadda shan meelood meel ragga adduunka oo dhan waa la gudo iyo tusaale ahaan dalka Mareykanka qiyaastii 80% ragga ayaa soo maray gudniinka, badankoodna sababo aan diin aheyn. Waddankan, gudniinku wuxuu gaadhay heerkiisii ​​ugu sarreeyay 60s halkaasoo ilaa 90% ragga lagu gudo. Xilligan farsamadan waxaa lagu sameeyaa qiyaastii 60% ragga dhasha ah.
Wadamada qaarkood oo diinta Islaamka ama Yuhuudda ay yihiin diimaha ugu badan, ficil ahaan 100% ragga ayaa ku hareeraysan.
Isbaanishka waa dhaqan naadir ah oo la yaab leh oo ragga badankood ay ku dhacaan dawo dhakhtar oo aan ahayn sababo diimeed ama dhaqan. Tan waxaa lagu kordhin karaa wadamada kale ee ka tirsan Midowga Yurub. Tusaale ahaan, Boqortooyada Midowday oo keliya 12% wiilasha dhasha ayaa gudniinka lagu sameeyaa.
Faa'iidooyinka iyo dib u dhaca
In kasta oo waxa inbadan oo inaga mid ahi ay ka fikiri karaan Faa'iidooyinka gudniintu way badan karaan. Kuwani waxay ka imaan karaan caafimaad ilaa heer galmo, waxaanan dib ugu eegeynaa hoos;
Gusku wuxuu leeyahay nadaafad wanaagsan iyadoo laga qaadayo maqaarka buuryada. Intaa waxaa sii dheer, infekshannada kaadi mareenka ayaa laga hortagaa, mar labaadna waxay sabab u tahay maqnaanshaha buuryada, taas oo markii loo baahdo, ay lagama maarmaan tahay in si joogto ah looga saaro si wasakhda looga saaro.
Ka fogow suurtagalnimada inaad ku xanuunsato qaar ka mid ah cudurada ugu badan ee guska sidee noqon kartaa phimosis, ka paraphimosis ama balanbaalis.
Boqolkiiba hoose, waxay caawisaa kahortaga infekshinka HIV.
Gudniinka ka dib iyo sida usbuucyo iyo xitaa bilooyin u socdaan gusku wuxuu u muuqdaa inuu korayo markii laga sii daayo frenulum-ka.
Waxaa jira a kordhinta waxqabadka galmada Sababtoo ah waxaa jira dib udhac ku yimaad shahwada, taasoo u oggolaanaysa la kulanka galmada ee muddada dheer.
Dhumucda glans waxay kordhisaa cabirkeeda maadaama uu iska sii daayay cadaadiska buuryadiisa. Tani waxay ka dhigeysaa cabirka caarada guska inay u muuqato mid aad u ballaaran.
Faa'iido darrooyinka gudniintu ma badna, laakiin xaaladaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay qaarkood jiraan, in kasta oo kuwa aan hoos ku soo bandhigi doonno ay aad u yar yihiin.
Xaaladaha qaarkood, a xasaasiyadda guska, inkasta oo ay kaliya ku dhacdo dhowr xaaladood oo aad u go'doonsan.
Infekshannada taasi waxay noqon kartaa wax aad looga xumaado aagga ay ka dhacaan.
Dhaawaca kaadi mareenka.
Xaalado aad u dhif iyo naadir ah, a glans goynta.
In kasta oo ay aad u faafto, haddana run maahan in gudniinku waxtar leeyahay kordhinta guska.
Sababaha uu gudniinku muhiim u yahay
Sababaha uu ninku u doorto in la gudo ayaa aad u kala duwan, in kastoo sidaan horay u sheegnayba ay badanaa u badan yihiin sababo caafimaad, dhaqan ama diin. In muddo ah ka sokow qaybtani sidoo kale waa la fulinayaa si looga hortago cudurada mustaqbalka.
Si aad ugu yara milicsano baaritaanka sababahan, hoosta waxaan ku tusi doonaa kuwa ugu caansan uguna caamsan ragga:
Burka hore ee aan dib looga noqon karin ee carruurta yar yar. Dhab ahaan cunug markuu dhasho malahan buuryada gadaal ee laga rogi karo, sidaa darteed waa in aan lagu qasbin duruuf kastoo jirta. Sanado badan tani waxay bilaabi kartaa inay dib u dhacdo. Haddii ay dhacdo in 4 sano ka dib weli aan laga noqon karin, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in lagu dhaqmo gudniinka.
Phimosis. Cudurkan ku dhaca wax ka yar 1.5% ee carruurta ayaa ka dhigaya furitaanka buuryada hore mid aad u cariiri ah, kana hortageysa dib u gurashada Waa hawl fudud oo lagama maarmaan ah. Qaar ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee cudurka phimosis waa cuncun ama dhiig ku taga cirifka hore ee buuryada, cuncun ama xanuun marka la kaadiyo, ama awood la'aanta kaadida si caadi ah.
Balanoposthitis daran. Xanuunkani wuxuu sababa xaaladaha badankood guduudasho iyo barar buuryada maqaarka ah, oo leh muuqaalka malax iyo dabcan oo leh muuqaalka xanuunka oo ka dhigaya faragelinta qalliinka lama huraan.
Paraphimosis. Tani waa mid kale oo ka mid ah cudurrada soo noqnoqda, taasna waxaa sababa markeeda phimosis aan la aqoon. Ninku wuxuu isku dayaa inuu si xoog ah dib ugu soo jaro buuryada maqaarka, isagoon awoodin inuu ku laabto meeshiisii ​​hore markii dambe. Tani waxay keentaa in indha indhuhu ay ku sii cadaadiyaan xanuunka iyo faragelinta dhakhaatiirta.
Gudniinka tilmaam caafimaad oo toos ah Kansarka guska.
para isku day inaad iska ilaaliso cudurada galmada lagu kala qaado. Daraasado badan iyo khubaro badan ayaa muujiyay in ninka gudan uu u nugul yahay cudurada galmada lagu kala qaado.
Ka fogaanshaha kaadimareenka kaadi mareenka.
para ka hortag cudurada mustaqbalka. Sababtaani waxay noqotay sababaha labaad ee ugu badan ee gudniinka loo sameeyo, sababo diimeed awgood.
Diinta Yuhuudda. Sida ku xusan buugga Bilowgii "gudniinku wuxuu u taagan yahay axdigii uu Ilaahay la galay Ibraahim iyo faracyadiisa" sidaa darteed badanaa waxaa loogu sameeyaa ragga diintaan sideed maalmood dhalashadooda ka dib.
Islam. Gudniinka si toos ah looguma sheegin Quraanka kariimka ah, laakiin wuxuu ku soo arooray sunnada ama waxa la mid ah dhaqankii nebi Muxamed. Sababtaas awgeed, inta badan ee sheegta inay ka tirsan yihiin diintaan waxaa lagu sameeyaa gudniin.
Gudniinku wax ma u dhimaa raaxada galmada ninka?
Tani shaki la’aan waa su’aasha inta badan ragga ay raadinayaan jawaab. Si looga jawaabo waa inaan dhahnaa taas Haa, gudniinku wuxuu saameeyaa raaxada galmada ee ninku dareemo, laakiin tani ma kordhiso mana yaraato laakiin waxay is bedeshaa marka xiriir galmo lala yeelanayo keligiis ama qof kale.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee gudniinku ku dhaco ragga waa dareenka indhaha, taas oo ka timaadda qayb xasaasi ah, una noqota qayb xasaasi ah oo ka mid ah guska, taas oo mararka qaarkood oo ku xidhan qofka la gaadhi karo si aad u badan . Waxaa jira rag uu ilmuhu ku arko wax kasta ama shay aad u xanaaq badan, maxaa yeelay waa mid xasaasi ah. In la gudo, dareenkan xad dhaafka ah ayaa baaba'aya.
Guud ahaan, gudniinku wax saameyn ah kuma yeelan raaxada galmada ee ninka, laakiin wuxuu wax ka beddelaa oo beddelaa ilaa xad. Sidaas waxaad u baahan doontaa inaad waxbarto, tijaabiso oo wixii intaa ka sarreeya aanad niyad jabin, Maaddaama waqtiga la soo afjarayo aan ku dhammaan doonno kulan iyo inaan ku raaxeysanno xiriir galmo kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Waxtarka gudniinka